GlobalNet | Unlimited Cloud Storage (Amazon S3)
Unlimited Cloud Storage (Amazon S3)
ရုံးသုံး software တွေ အသုံးပြုချိန်မှာ storage မလုံလောက်ခြင်းကြောင့် access time အတွက် အဆင်မပြေဖြစ်နေပြီလား…
Enterprise application များ၊ website များ၊ mobile application များအတွက် လိုအပ်သော storage amount ကို ခန့်မှန်းနိုင်ရန် အခက်အခဲဖြစ်နေပါသလား… ရုတ်တရတ်ဖြစ်ပေါ်လာသော အခြေအနေများကြောင့် storage အရေးတကြီးဝယ်ယူရန် လိုအပ်နေပါသလား…
ဒီလိုအခက်အခဲများကို ဖြေရှင်းပေးဖို့အတွက် Amazon S3 မှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးမှာပါ… Amazon S3 အသုံးပြုခြင်းဖြင့် storage မလုံလောက်ခြင်း၊ ကြိုတင် investment ပြုလုပ်ထားရခြင်း၊ website/page/software/application များ အသုံးပြုရာတွင် အခက်အခဲဖြစ်ခြင်း၊ emergency ဝယ်ယူလိုခြင်းစသည့် အဆင်မပြေမှုများကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်သည့်အပြင် scale up/scale down ပြုလုပ်ပေးသည့်အတွက် cost waste ဖြစ်ခြင်းမှလည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်…
Global Technology Company မှ Amazon ၏ official partner အဖြစ် Amazon S3 (Simple Storage Service) ကို ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပြီး local engineering team အနေနဲ့ AWS certified engineer များမှဆောင်ရွက်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်….
? Visit Now : www.globalnet.com.mm/cloud-services/public-cloud-services/
? Email : digitalsales@globalnetmm.com
? Hot Line : +959883080849, +9599883080847, +95995054037
? Contact Us: Building (16), MICT Park, Hlaing Township, Yangon, Myanmar
GlobalNet ဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှ တဆင့် ...
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်း အမြန်ဆုံး...
၀၂၀ခုနှစ် – ဆက်သွယ်ရေး ထိပ်တန်းဝန်ဆောင်မှုပေးအပ်နေသည့် ...
The Brand: AWS Cloud Solution ...